I-4 Iikholeji zokuQinisekisa zeMicrosoft kunye neZatifikethi -UQEQESHO lwazo
I-4 Iikholeji zoQeqesho eziMangalisayo kunye neZatifikethi eMicrosoft
1. Uqeqesho oluphambili lwe-Microsoft Excel 2013
Abantu ekujoliswe kubo
2. Izixhobo zeMicrosoft Active Directory nge window windows 2012R2
3. Isingeniso kwi-Microsoft Office 365
I-365 ye-IT Pros
Ukuqala nge-Office 365
Iofisi yoHlelo lwe365
I-365 Iinkonzo zoNxibelelwano
I-Office 365 Ulawulo loTshintsho
4. Ukuzisa nokuhlela iMicrosoft SCOM 2012
Le khosi eqhubekileyo yokufundisa i-Microsoft Excel 2013 ijoliswe kwiimfuno zokubamba izixhobo ezibalulekileyo zokusebenzisa iithayibhile, ukuphonononga nokusabalalisa ulwazi lwephepha lokusebenzela, sebenzisa iifayili zeenkcukacha, iqela kunye nabanye, kwaye wenze kwaye uphathe i-macros.
Le khosi icwangciselwe abasebenzi abaphakathi kwamanqanaba endlela kunye ne-Microsoft Excel 2013 abafuna ukuthatha iikhono okanye iimfuno ezingaphezulu ezifunekayo ezithatha ukuthatha kwiingqungquthela ezihlanganiswe kule khosi kwi-interface ye-2013.
Emva kokugqitywa kweli nqanaba, izifundo ziya kuba namandla oku:
Yenza amathebula okujika kunye nemizobo.
Landela amanqaku okubhekisa kunye neewadi.
Shintsha umxholo kwaye uvumele kwaye uqinise ulwazi.
Iqela kunye nabanye ngokufumana ama-worksheets kunye neencwadi zokusebenzisa.
Yenza, sebenzise, ​​utshintshe, kwaye ubeke i-macros.
Ukungenisa nokuthumela ulwazi.
Fumana izandla kwisikhokelo kunye nokusebenza ekulawuleni ukuqhubela phambili kwe-Active Directory kwi-Windows Server 2012 kunye ne-Windows Server 2012 R2 kule nkqubo ye-Microsoft ye-5. Uya kuthatha ubunzulu obunokukujongela phambili kwaye uqinisekise ulwazi olufikelela kuyo kunye nedatha, ukulungelelanisa intlangano kunye nokulawulwa kweziseko zesakhiwo sakho, kwaye unikeze ukufikelela okukhuselekileyo kolwazi. Uza kufunda indlela yokulungisa isahlulo seenkcukacha eziphambili kwi-Active Directory, umzekelo, iiNkonzo zeDesign Domain Domain (AD DS), Policy Group, iDynamic Access Control (DAC), iiFolders Work, Indawo yokuSebenza, UkuBala, iiNkonzo zeMatriki, uLungelo loLungelo IiNkonzo (i-RMS), iiNkonzo zeeNkampani, kunye nokudibanisa kwakho ukuzisa indawo kunye ne-cloud based innovations, umzekelo, iWindows Azure Active Directory. Njengento ebalulekileyo kwimvelaphi yokufunda, uya kwenza imisebenzi-yezandla kwi-laboratory yangaphandle.
Le khosi ilindeleke kwiNgcali zoLwazi lweeNkcukacha zoLwazi (IT) Abaqeqeshi be-Active Directory Domain (i-AD DS) kwaye bajonge kwikhondo elizimeleyo eliya kudibanisa nokudala ukufunda nokusebenzisa ubuchule bokuFumana kunye noKhuselo lweNkcukacha kwiWindows Server 2012 kunye neWindows Server 2012 R2. Oku kuya kubandakanya:
Ukukhangisa abalawuli be-DS abanethemba lokungezelela ukudala iziphumo ekuhambeni kwangoku kufikeleleka kokuFikelela nokuKhuselwa koLwazi ngeWindows Server 2012 kunye neWindows Server 2012 R2.
I-Framework okanye i-Infrastructure chairmen kunye nolwazi jikelele lwe-AD DS kunye nolwazi olunokuba yilokig ukwandisa malunga nolwazi oluphambili kwaye lufundiswe ngokubanzi ekuqhubeni phambili kwi-Active Directory yophuhliso kwi-Windows Server 2012 kunye neWindows Server 2012 R2.
Iingcali ze-IT ezithathileyo i-10967A: Izifundo ezisemgangathweni ye-Windows Server Infrastructure course kwaye zithemba ukunweba kwi-Active Registry Information.
Ukuqwalasela izisombululo ezifikelelekayo zokulawulwa kwezimpawu kwaye ube namandla okulungisa iimeko kunye nezicwangciso ezifanelekileyo.
Dlulisa kwaye ulawulo lwe-AD DS kwi-Windows Server 2012.
I-AD ekhuselekileyo yokuthumela.
Yenza izikhundla ze-DS zendawo, ulungiselele uphinde uhlolisise ukuphindaphinda
Ukufeza nokujongana neMigaqo yeCandelo
Ukujongana nezicwangciso zamakhasimende kunye neQela leNkqubo
Ukufeza umbane wesigunyaziso (CA) somyalelo nge-AD CS kunye nendlela yokujongana nee-CA.
Ukufeza, ukudlulisela nokujongana nezivakalisi.
Ukufeza nokujongana ne-AD RMS.
Ukufeza nokulawula i-AD FS.
Ulwazi olukhuselekileyo nolungiselelo luya kusebenzisa ukuqhubela phambili, umzekelo, ukuLawula ukuPhathwa kweDynamic, iiFold Work Work kunye neSebenza emsebenzini
Isikrini, uphando kwaye usethe ukuhambelana kwezoshishino kwi-AD DS.
Qalisa i-Windows Azure Active Directory.
Ukuhlaziya nokulawula iiNkonzo zeeNcwadi zoLwazi oluPhezulu lwe-Active Directory (AD LDS).
I-Ofisi ye-365 Iimfuno ezijongene nezikwere zokwakha ze-Office 365 kunye nenxalenye ephuhlisayo ye-IT Professionals. I-Microsoft Office 365 idibanisa ukulawulwa kwefu kunye nezicelo zokusebenza zakutshanje. Inkqubo iqala ngokuhlalutya ubunjineli be-Ofisi ye-Office 365 kwi-IT Professional, ngoko kuthatha ingqalelo ngokuthumela i-Office 365 kwaye igqiba ngokuthatha utshintsho kwizicelo kunye nokulawula.
I-Ofisi ye-365 idlulisela ubuchule abaceliweyo kubaxhasi xa bevumela i-IT ukuba ihlale ilawulwa. Yiba nokuba kunjalo, olu tshintsho ludinga i-IT Pros ukulungelelanisa izikhundla zabo zeseva zabathengi kwixesha le-computer. Kulo mzila, i-IT Pros iya kubona indlela izakhi ezintsha eziza kwi-Office 365 ukuqala ngayo, zifumanisa malunga nezixhobo ezintsha kunye neenkqubo zokufudukela kumsebenzi wendawo yomsebenzi kwi-Office 365, kwaye ucwangcise inxalenye entsha yokusebenza ye-IT Pros.
Le Ofisi ye-365 ibaluleke kakhulu kwiinkqubo ezifundisayo kwiinkcukacha ze-IT kunye neziko leziko le-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi yesiXhosa.
Esi seshoni kwimiba enomdla kuMicrosoft yokuthumela indlela yokuthumela i-Office 365. Ukudlulisa i-cloud management not at all like a standard customer service organization ukunyusa kwaye kudinga amakhono amatsha kunye neendlela. Nge-Office 365, iofisi ze-IT ziyakhuphuka ngokukhawuleza kwaye ziqhube kunye nomqhubi kwaye ziqhubele kwisizukulwana kunye nolungiselelo oluchanekileyo lwamandla. Khangela ngenkqubo yokuthumela, izixhobo kunye nemisebenzi esetyenziselwa ukuphucula ukuqala kwe-Office yakho ye-Office 365.
Le Ofisi ye-365 iyimfuneko yeeseshoni zeseshoni ezenza umdla nakwezinye iindlela kunye nokucingisisa ngelixa likhula i-Ofisi ye-Ofisi ye-Ofisi ye-365 kwimeko yokwenza isizukulwana.
Esi seshoni lijolise kwi-Ofisi ye-Ofisi ye-Office 365. Njengoko kuxhomekeke kwi-mode mode benefit, ukugcinwa kwamashishini okubambisana phakathi kweengcali ze-IT kunye neqela le-Office 365 liyisiseko. Jonga indlela ukulungiswa kolawulo lwe-Office 365, ukugqithisa, ukulungiselela inkxaso, nokuphathwa kakuhle nokuhanjiswa kweendlela kunye nendlela yokuxhuma kunye ne-Microsoft.
Le Ofisi ye-365 iyimfuneko yintlanganiso yokufundisa ibonisa indlela iMicrosoft ethatha ngayo ukuphuculwa kunye nendlela yokujongisa utshintsho kulawulo lwe-Office 365 kunye nezicelo kwindawo yakho.
Le khosi yee-five-day inikezela phantsi kokufunda kunye nokukwazi ukuzisa nokuyila iMenenja ye-System Centre ye-2012 Operations Manager. Ukongezelela kweli nqanaba liza kusekwa phantsi kokujongana ne-2012 Manager Manager infrastructure.
Le khosi icetywayo kwiingcali ze-IT ezine-Windows Server esebenzayo, i-Active Directory kunye nokuseta inkqubo kunye nokuhlangana.
Ekugqibeleni ukugqitywa kweli nqanaba, izifundo ziya kuba namandla oku:
Qalisa umphathi we-Operations 2012 kwaye uhlele umhlaba wonke kunye ne-Management Server izicwangciso ezithile.
Sebenzisa Amacandelo eZibonelelo zokufikelela kwiindawo eziphezulu.
Hlola i-Console Manager ye-Operations kunye ne-Web Console.
Yenza zombini iikhompyutha kunye nokusetyenzwa kwabasebenzi besikhokelo kwiingxowa-nkqubo ezingaphezulu.
Ukungenisa kunye nokuhambisa iipakethi zokulawula.
Yenza iMigaqo, iMicimbi, i-Monitor and Tasks.
Hlela Ukubika kunye nokwenza ingxelo.
Izixhobo zokusebenza kwesikrini kunye namaseva asebenzisa ukuLawiswa kweAgentless and Monitoring Exception Monitoring.
Yilungiselele kwaye ilungele iNkonzo zoThutho zoVavanyo.
Yenza i zicelo.
Ininzi ikhaya eliyingcali.
Hlela iseva ye Gateway ngokuqwalasela iimeko ezingakhawulezileyo.
Hlela ubhalelwano phakathi kwamabhanki olawulo.
Hambisa kwi-Operations Manager 2007 kwi-2012 Operations Manager.
I-CEO ye-Apple I-Tim Cook ivunayo i-198 yezigidi kwi-2016, Ngaba kunjalo
I-Google iphelisa iNkqubo yeDroneone, ngaba yiRumor